ဝန်ထမ်း ရာချီရှိသည့် ဗြိတိန် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီး မြန်မာကို စွန့်ခွာမှု နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အထိနာစေ | PN | Popular
ဝန်ထမ်းရာချီရှိသည့် ဗြိတိန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီး မြန်မာကိုစွန့်ခွာမှု နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အထိနာစေ
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းပြီးနောက် ၂၀၁၃ခုနှစ်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲ လာရောက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့. BAT Myanmar ဟာ လုပ်ငန်း အားလုံး ရပ်ဆိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီး ၁၀ခုထက်မနည်း ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် London, KENT, Lucky Strike စတဲ့ စီးကရက်အမှတ်တံဆိပ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ BAT Myanmar ကလည်း ထွက်ခွာဖို့ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်ကစပြီး ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းနဲ့ ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလကနေ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ဝန်ထမ်းထောင်ချီရှိတဲ့ လှိုင်သာယာက အထည်ချုပ်စက်ရုံ အချို့ အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း က စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ ၁၇၉ ရုံဟာ ပိတ်သိမ်းသွားကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရာ အခြေအနေတွေ မပေးတော့တာကြောင့် ရပ်ဆိုင်း သွားကြရတာဖြစ်ပြီး သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ လုပ်သားတွေလည်း အလုပ်မဲ့ ကုန်ကြရပါတယ်။
နိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက် သွားမှုနဲ့အတူ စက်သုံးဆီဈေးတွေ မြင့်တက်မှုတွေက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ အပေါ် ရိုက်ခတ်လာချိန် အလုပ်မဲ့ သွားတာတွေက အခြေခံပြည်သူတွေကို ဆိုးကျိုးတွေ ပေးကုန်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံ ထဲ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစရာတွေကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး နိုင်ငံရှေ့ဆက်နိုင်မှပဲ ဒီပြဿနာတွေက အေးသွားမယ် လို့ ထောက်ပြသူတွေကလည်းရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လနဲ့ ဇူလိုင်လက ရိုးမ မဟာဗျူဟာဦးပိုင်လီမိတက် (YSH) လက်အောက်က ရိုးမအစားအသောက်နဲ့ အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းနဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် Focus Brands တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Auntie Anne’s Myanmar ဆိုင်ခွဲတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်လမ်းမ စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တိုင်အနီးရှိ Junction Square ဆိုင်ခွဲ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ် ရှိ Myanmar Plaza ဆိုင်ခွဲ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်ရှိ Junction City ဆိုင်ခွဲတွေကို ပိတ်သိမ်းခဲ့တာရှိပါတယ်။
ဝန္ထမ္းရာခ်ီရွိသည့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီး ျမန္မာကိုစြန႔္ခြာမႈ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အထိနာေစ
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့. BAT Myanmar ဟာ လုပ္ငန္းအားလုံး ရပ္ဆိုင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ထြက္ခြာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီး ၁၀ခုထက္မနည္း ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ London, KENT, Lucky Strike စတဲ့ စီးကရက္အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ BAT Myanmar ကလည္း ထြက္ခြာဖို႔ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ကစၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ၊ အေရာင္းနဲ႔ ျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံမွာ. ေဖေဖာ္ဝါရီလကေန စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ဝန္ထမ္းေထာင္ခ်ီရွိတဲ့ လႈိင္သာယာက အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံ ၁၇၉ ႐ုံဟာ ပိတ္သိမ္းသြားၾကရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရာ အေျခအေနေတြ မေပးေတာ့တာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားၾကရတာျဖစ္ၿပီး ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ လုပ္သားေတြလည္း အလုပ္မဲ့ကုန္ၾကရပါတယ္။
ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္သြားမႈနဲ႔အတူ စက္သုံးဆီေဈးေတြ ျမင့္တက္မႈေတြက ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြအေပၚ ႐ိုက္ခတ္လာခ်ိန္ အလုပ္မဲ့သြားတာေတြက အေျခခံျပည္သူေတြကို ဆိုးက်ိဳးေတြ ေပးကုန္ၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံ ထဲ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိဖို႔၊ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစရာေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ႏိုင္မွပဲ ဒီျပႆနာေတြက ေအးသြားမယ္လို႔ ေထာက္ျပသူေတြကလည္းရွိပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လနဲ႔ ဇူလိုင္လက ႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာဦးပိုင္လီမိတက္ (YSH) လက္ေအာက္က ႐ိုးမအစားအေသာက္နဲ႔ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းနဲ႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Focus Brands တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ Auntie Anne’s Myanmar ဆိုင္ခြဲေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္လမ္းမ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွတ္တိုင္အနီးရွိ Junction Square ဆိုင္ခြဲ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚ ရွိ Myanmar Plaza ဆိုင္ခြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚရွိ Junction City ဆိုင္ခြဲေတြကို ပိတ္သိမ္းခဲ့တာရွိပါတယ္။
"အောက်တိုဘာ ၁၂ရက်နေ့ကစပြီး ပရိတ်သတ် ရဲ့ လက်ဆောင်တွေ BlackPink လက်ခံတော့မည် မဟုတ်"
“တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်မှာ မွေးကင်းစ ကလေး တစ်ယောက် စွန့်ပစ်ခံ ထားရတဲ့ အတွက် ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများ ဂေဟာထံ အကူညီတောင်း”
မင်းဘူးမြို့နယ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏အလုပ် အမှုဆောင် ၂ ဦးထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီအမိန့်ချခံရ